Jimco, Abriil 1, 2022 Jimco, Abriil 1, 2022 Douglas Karr
Markaan maqlo qof xusaya ereyga backlink oo qayb ka ah istaraatiijiyada suuqgeynta dhijitaalka ah ee guud, waxaan u janjeeraa inaan qoomamo. Waxaan ku sharixi doonaa sababta qoraalkan laakiin waxaan rabaa inaan ku bilaabo taariikhda qaar ka mid ah. Mar, makiinadaha raadinta waxay ahaan jireen hageyaal waaweyn oo ugu horrayn la dhisay lana dalbaday wax badan sida hagaha. Algorithm-ka Pagerank Google ayaa bedelay muuqaalka goobidda sababtoo ah waxay isticmaashay isku xirka bogga loo socdo miisaan muhiim ah. A
Arbacada, Maarso 30, 2022 Arbacada, Maarso 30, 2022 Douglas Karr
Ganacsi ahaan, waxaad gelisay wakhti badan, dadaal, iyo lacag sidii aad u samayn lahayd degel cajiib ah ama goobta ganacsiga e-commerce. Dhab ahaantii ganacsi kasta iyo suuqleyba si isku mid ah waxay u shaqeeyaan si adag si ay u helaan booqdayaal cusub oo boggooda… waxay soo saaraan bogag wax soo saar oo qurux badan, bogag degitaan, waxyaabo iwm waayo. Marar aad u badan, si kastaba ha ahaatee, booqdahaas ayaa yimid oo akhriyay dhammaantood